Ntuziaka maka Nkịtị-ndụ na-ese foto
Ihe omume ntụrụndụ na ihe omume Usoro
Ntuziaka 10 kachasị maka ụmụ akpụ akpụ
Ntughari aka na ntuziaka maka eserese nkịta
Nkịta a na-ese ihe nwere ike ịba ụba, ma na-arụsi ọrụ ike dịka onye nkịta ọ bụla ga-achọpụta na ọ gaghị ekwe omume ịnweta nkịta ịnọdụ ala ka ị na-arụ ọrụ na ịchọta ụzọ dị mma ... Ma enwere ihe ndị ị nwere ike ime iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe mgbe esere nkịta. Lee iri n'ime ha:
Ihe osise ntanetị Nkeji 1: Adịghị Mmetụta Nchegbu
Ọbụna nkịta a zụrụ nke ọma apụghị iguzo ruo ọtụtụ awa (ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ịgbalị), ya mere echela onwe gị site n'ịgbalị ime ya.
Mee ngwa ngwa, weghachite foto maka ihe ndị ị chọrọ ma mee nyocha zuru ezu na ndụ mgbe nkịta gị na - ehi ụra - ọ gaghị abụ akụkụ ị chọrọ, mana ọ bụ ezigbo omume maka aji , mọzụlụ, na oke . Gwa onye òtù ọlụlụ gị ka ọ na-agagharị nkịta gị azụ na n'ihu n'ihu gị ka i wee nwee ike ịhụ ya na eserese (cheta na ịnweta ụgwọ ọrụ maka ma mgbe ị mechara!).
Ihe osise nke eserese Nkeji 2: Ghọta Ikike Ike Ibe Gị
Kwa nkịta ọ bụla nwere àgwà nke aka ya, ma ọ bụ imi dị obere nke Pekinese ma ọ bụ ntutu isi nke a. Mara ụdị isi, ọdịdị, na àgwà nke ụdị anumanu ụfọdụ ma ọ ga-eme ka onye nkịta dị mfe karị. Ọ bụrụ na ị na-ese 'eserese pụrụ iche', ị ga-enwe ike iji ihe ọmụma gị banyere nkịta dị iche iche na-achọpụta ihe nketa ya. Ma n'otu oge ahụ, jide n'aka na ị na-ejide otu onye nkịta ma ghara ịmepụta ọnyà.
Jiri ya n'otu ụzọ ahụ ndị na-ese ihe na-eji ihe omuma ha banyere mmekorita mmadu eji eme ihe dika ihe ndabere maka eserese.
Ihe osise nkedo Nkume 3: Ntutu isi
Ọ bụghị nanị na ntutu isi na-adịgasị iche n'ogologo, agba, na ntụgharị, ma ọ na-etolite n'ọtụtụ ụzọ n'akụkụ dị iche iche nke ahụ. A na-ahụ nke a ọbụna na nkịta kachasị nkịta.
Ihu ihu bụ otu mpaghara ebe ọtụtụ 'mgbanwe' dị na ntutu isi.
Ihe osise a na-esepụta akpụkpọ ụkwụ 4: Anya
Malite site n'ile anya ebe ihe dị mkpa dị na nkịta. Detuo nke a, mgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ nwata ahụ (nke na-acha oji nke anya), mgbe ahụ ka ọnụ ọgụgụ nke iris (acha agba) na mgbe ahụ anya. Ọ bụrụ na ịchọta ihe dị mkpa n'anya anya nkịta na ebe kwesịrị ekwesị na nke ziri ezi, anya ga-ele anya.
Nkume Nkume nke Nkume 5: Agba Anya
Otutu nkita nwere anya uhie, ma o bughi na agba aja aja nile bu otu, ma obu akwa, ya mere ka o doo anya na obughi agba aja anya kama ichoputa anya nke oma nke anya nkita ahu. Irises nke anya nkịta na-adọrọ adọrọ adịghị achọpụta ya. Dị ka ụmụ mmadụ, nkịta nwere ike inwe anya dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ bụ obere.
Ihe ntanetị akpụkpọ anụ 6: Ears
Ntị na-ekere òkè dị mkpa n'ichepụta mmadụ na eserese nke nkịta. À na-agbanye ha, na-ege ntị? Droopy? Mmadụ ọ na-apịaghachi azụ n'onwe ya? Leba anya na ebe ha na-anọdụ ala n'isi, n'ihi na nke a dịgasị iche n'etiti anụ ọhịa si n'akụkụ dị n'akụkụ aka nri n'elu isi. Nyochaa ogologo oge nke nti - ọ nwere ike ịdị ogologo karịa ka ị chere!
Ihe osise akwa akpụkpọ ụkwụ 7: Ụkwụ na Paws
Ọ na-esiri m ike inweta ndụ dị ka à ga-asị na ha adịghị agagharị, ha na-ahụkarị ya. Foto ntanetị dị ezigbo uru maka ịhụ na ị ga-enweta ụkwụ 'ụkwụ' n'ụkwụ nkịta. Otu uzo di iche iche nwere uzo mara ya na uzo, dika ihe atu na ntu nke English bulldog adighi emetu aka n'ala n'ihi ugbo ozo di elu, ebe nkpa nke ihe nkpa ihe na-agbanye ihe ozo. Ọ bụrụ na ọ bụ nkịta dị ogologo, chebara otú ntutu isi si daa; na nkịta dị mkpụmkpụ na-ele anya otú ọdịdị ahụ siri dị iche mgbe nkịta nọ ọdụ, na-eje ije, ma ọ bụ na-agba ọsọ. Azu nwa nkita nwere ike buru ibu dị ka akụkụ ahụ ya (na-abụkarị ihe àmà nke oke nkịta ha ga-etolite).
Ihe osise akwa akpụkpọ ụkwụ 8: Ụdị
Ahuru abụghị ihe araparaworo na njedebe nke nkịta n'elu ụkwụ ya.
Kama nke ahụ, ọ bụ mgbatị nke azụ ya na ihe ngosi dị mkpa nke ọnọdụ. Lezienụ anya otú nkịta si ejide ọdụ ya, ma ọ na-achọ ịtọ ya aka ekpe ma ọ bụ aka nri mgbe ọ na-anọdụ. Lee ot 'u isi si agba na agba ya. Ogwu dị ogologo nwere isi na-adịrị mfe ka ese karịa ọdụ ụkwụ dị mkpụmkpụ, nke ọ dị mkpa ka a sụgharịa ya n'ụzọ ziri ezi ma dị ka ọ dị mma.
Ihe Egwu Nkume nke 9: Ndị Okenye Agadi
Ihe àmà kachasị anya nke afọ na nkịta bụ aji na-acha ọcha ma ọ bụ agba ntụ gburugburu agba, na emesịkwa obi na n'ihu ụkwụ. Chọọ maka ezuru efu na ezé ezé, karịsịa canines.
Ihe Edere Nkume Nkeji 10: Nye Sense nke Ọtụtụ
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe dị na eserese iji tụnyere nkịta ahụ, olee otú onye na-ekiri ya si mara otú nnukwu ma ọ bụ obere ọ dị? (Ọ bụghị onye ọ bụla bụ onye nkịta na-ahụ n'anya ma chọpụta ụdị ahụ!) Tinye ihe dị na eserese iji mee ka a ghọta nke ọma, ma ọ bụ bọl, ọkpụkpụ, nnukwu mmiri, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Nwee uche n'eme ihe gị, egbula nkịta n'ihu gị, ma ọ bụ site n'ọnụ ndị mmadụ na-elekarị nkịta (yabụ n'elu). Kedu maka ịkpụpụta nkịta site n'echiche nwa nwa nkịta?
Ihe ndị a na-eme na Paịlet na Mmasị nke Nna-ukwu Ndị Na-eme Impressionist: Claude Monet
Usoro eji eme ihe osise karia
Ihe eji eme mmiricolor: Idebe ákwà
Ọ Dị Mma Iji Jiri Ụlọ Ihe Ewu Ụlọ?
Style na Palette Leonardo da Vinci
Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ Iji Mee Onwe Gị Ncha White
Ihe osise a na-ese onyinyo
Gbanyee esere ese gị n'ime ihe odide ma ọ bụ kaadị ekele
Otu esi ehichacha nkucha gị
Iwepụ Nwunye na Canvas
Otu esi ehichapu nhichapu
Chọrọ ka ị nweta ozi ọma nke United States
Ihe atụ nke Njirimara Chemical
Iwu ime na iwu ọ bụla ọ bụla?
Okpukpe Na-ekweghị na Chineke?
Akụkọ banyere Ụmụ nwanyị na Ụlọikpe Kasị Elu
Site 5 (Par-5 Oghere)
Atụmatụ maka ndị nkuzi iji mee ka oge na-amụbawanye oge
Egwuregwu egwu kacha mma nke ụlọ akwụkwọ ochie
Akwụkwọ Scripps College Admissions Facts
Nsogbu nke Nganga
Esi tinye Ngwunye windshshield ụgbọala na ụgbọ ala gị
Igwe kpakpando 'Rick na Morty'
Njikọ nke 'Poder'
Lucius Cornelius Sulla (138-78 BC) - "Filiks"
Isi nke 10 "Ihe Odighi Akwukwo Nso"
Egwuregwu Mba Nile Maka Azụ Guitar
Akụkọ Jezebel na Baibul
Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Ngwá Ọrụ na Njirimara
Ebee ka Egwuregwu Ọchịchị Na-agba Ọkụ Ụwa na-eme maka ndị okenye
Jade na omenala Chinese
Best metal Band band
Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ na Stargate
Kedu Okike M Kwesịrị Ịmụ Ahụike?
Mantel na Mantle
Gịnị bụ "Chineke-Eze"?